Hordhaca mesh-qurxinta biraha qaybsiga
Iyada oo horumarka farsamada ee beerta qurxinta dhismaha iyo soo bixitaanka joogtada ah ee qalabka dhismaha, dhismaha shabakada qurxinta birta, oo ah wakiil ka mid ah qalabka cusub ee ilaalinta deegaanka ee warshadaha, ayaa soo jiidatay dareenka ballaaran ee warshadaha. Alaabooyinka ayaa si tartiib tartiib ah u bislaaday, caan baxay oo lagu dabaqay mashaariicda qurxinta dhismaha ee caanka ah, oo si tartiib tartiib ah ugu dhaqaaqaan suuqa caalamiga ah.
Tilmaamaha mesh qurxinta birta qaybinta
bir aan lahayn, naxaas, aluminium
Mesh silig tolan
mesh qurxinta biraha qaybsan
Silver, Dahab, ama midab kasta oo kale oo aad jeceshahay
Astaamaha mesh qurxinta birta qaybinta
Shabaqyada qurxinta birta waxaa loo habeyn karaa midabyo gaar ah. Shabagyada qurxinta birta ee midabka leh waxay ka samaysan yihiin qalabyo kala duwan iyo habab farsameed oo kala duwan. Marka lagu daro ilaalinta faa'iidooyinka shaqada ee birta iyo si sahlan loo ilaaliyo, muuqaalkooda siman waa sahlan tahay in la nadiifiyo, oo si fiican u buuxiyaan shuruudaha naqshadeeyaha ee qaabka iyo shakhsiyadda.
Shabakadda siligan waxay isku daraysaa bilicda iyo shaqeynta si ay u bixiso soo jiidasho muuqaal ah oo soo jiidasho leh, raaxo kordhin, badbaado iyo waxtarka tamarta. Dhisidda mesh siliggu waa mid ka mid ah qaababka ugu waxtarka badan ee hadh cadceedda waxaana loo qaabayn karaa inay u adkaysato dabaylaha xooggan. Waxaa lagu rinjiyeeyaa midab kasta ama cabbirka la jaray laser. Haddi aad dooratid mesh aluminium, mesh birta ah ama birta galvanized, mesh siligayada qaab dhismeedka qaabdhismeedka ayaa si qurux badan u qurxiyaa darbiyada iyo saqafka iyadoo ay ka tarjumayso iftiinka oo ku daraya muuqaal gudaha gudaha.
Hore: Daahyada Daahyada Qurxinta ee Birta Aan-Aan-la-aanta lahayn ee Xargaha Xargaha
Xiga: Birta aan fiicnayn ee heerkul sarreeya ee mesh fiber-ka-soo-baxa, fiber-ka-soo-baxa ayaa la dareemay
Isku xirka biraha qurxinta ee isku dhafka ah
Tilmaanta mesh-ka-wareegga qurxinta ee NO. Tixraaca Mesh Material Spiral Dhumucdiisuna waxay ka gudubtay x ballac dhexroorka usha goynaya Garoonkii Usha Goostay Miisaanka 1 SK-2001 birta aan fiicnayn 201,304,316, 316L iyo wixii la mid ah; Bir kaarboon hoose 1.0mm x 1.6mm 1.5mm 8mm 12mm 6.0 KG/m² 2 SK-2002 1.0mm x 1.6mm 1.2mm 13mm 8.0mm 3.0 KG/m² 3 SK-2003 1.01mm 3 SK-2003 1.01mm 3 .0mm m² 4 SK-2004 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 11mm 18mm 7.5 KG/m² 5 SK-2005 1.4mm x 2.3mm 2.0mm 12mm 23mm 6.5 KG/m² 6 SK-2006mm